IBraya Villa (kubandakanya isidlo sakusasa kunye nokugcinwa kwendlu) - I-Airbnb
IBraya Villa (kubandakanya isidlo sakusasa kunye nokugcinwa kwendlu)
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguNash
Indawo entsha ephucukileyo yabucala yephuli enendawo yokujonga ulwandle ekhethekileyo Ifumaneka eKo Yao Yai, imizuzu engama-30 ukusuka ePhuket ngesikhephe esikhawulezayo. Uyilo lujolise kubumfihlo obuphezulu beendwendwe kwaye lubandakanya igadi yabucala, inkundla ye-badminton, inkundla ye-petanque, itafile ye-pool kunye nemidlalo yebhodi.
Ukubonelela nge-2 master bedrooms aneebhedi zobukhulu benkosi (iibhedi ezongezelelweyo ziyafumaneka ngentlawulo eyongezelelweyo). Omabini amagumbi okulala anombono ongaqhelekanga wolwandle, aneshawari yangaphakathi nangaphandle kunye nezinto zangasese. Iphelele kwiholide yakho yokubaleka
Kwisiqithi, undwendwe lunokonwabela i-snorkeling, ukuloba, ukukhwela iphenyane, i-ATV, njl.
Isidlo sakusasa saseMelika, saseAsia okanye selizwekazi silungiswa ntsasa nganye ngokokhetho lwakho. Ngesidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa sinikezela ngebarbecue okanye ukutya kwaseThai ngokwesicelo ngentlawulo eyongezelelweyo.
Ukuhamba ngesikhephe esinesantya usuka ePhuket kangangesiqingatha seyure ukuya kufika eKo Yao Yai, iseti yeBraya Villa. Kuzo zonke iindawo kukho iilwandle ezintle, kunye ne-snorkeling, ukuloba, kunye nokuhamba ngephenyane konke okukhoyo. Cela abasebenzi ukuba benze amalungiselelo okurenta isithuthuthu ukuze bajongwe.
Umbuki zindwendwe ngu- Nash
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Koh Yao Yai,